Gumii Oromiyaa Adduunyaa – GGO « QEERROO
Gumii Oromiyaa Adduunyaa
Hiwi Elona ~ Eb/2017
Yeroo ammaa kanatti Gumiin Oromiyaa Adduunyaa 1ffaan biyya Ameerikaa Naannoo Miniisootaa keessatti gaggeeffamaa jira. Haa ta’u malee namoonni hedduun gumii kana ilaalchise hubannaafi odeeffannoo gahaa waan qaban natti hin fakkaatu. Gumiin kuni yeroo jalqabaatif kan gaggeeffamu ta’uu isaa irraan kan ka’e namoonni hedduun maalummaafi galma isaa sirritti hubannoon isaan qaban baay’ee gadi aanaadha jechuun ni danda’ama.
Akka hubannoo kootiitti Gumiin kuni Jaalleewwan Oromoo qabsoon Oromoo ( kallattii isaanitti fakkaaten) of dura akka tarkaanfattuuf kanneen ifaajaa jiraniin kan qindaawedha. Gama tokkoon gareen gumii kana qopheesse gumii isa dabre kan Hoggansa Oromoo waliin wal ta’ee maalif akka hojjachuu dadhabe wanti hunda keenyaaf ifa ta’e jiraachuu baatus, eenyumtuu gama itti fakkaaten qabsoo keenyaaf tumsaa sila jiruuf galanni isaanif qabnu akkuma eeggametti jiraachuu qaba jedheen amana. Amma irra taa’anii kallattii gara garatiin adeemuun hamileefii hawwi uummata keenyaa waliin tasuma kan hin deemne ta’us, bu’aafi miidhaa inni nuuf qabu ilaallee irraa deebi’udhaaf garuu faaydaa qabaachun isaa hin oolu.
Uummanni Oromoofi Qabsoon Bilisummaa Oromoos dhawaata bilchaachaa, jijjiiramootafi guddina garagaraa keessa darbaa jira. Jijjiirama kana keessatti rigaatin ( friction) uumamus yaadotni garagaraa akka burqaniif karra saaqaa jira. Kunimmoo, tarii asii achi yoo ilaallu qoqqoodama nutti fakkaachun mala malee ija tarsiimawaatiin yoo ilaalle faydaa guddaa nuuf qaba. Osoodhuma bu’aan tokkoyyuu dhufuu baatee yaalanii arguun mataan isaa qisaasama ofduraaf nu mudatuun malu hambisuu keessatti gahee guddaa qaba. Tarii gaafuma bilisummaa arganneyyuu wantoota akkanaatti qaamni galuuf tattaaffatu jiraachun ni mala. Kanaafuu osoo sun hin ta’iniin dura har’uma waan hunda arganii irraa barachuun, muuxannoo irraa fudhachuun waan nu fayyadu malee waan nu miidhu hin qabu.
Walgahii gaggeessun riqicha galma keenya of dura tarkaanfachiisu malee galma keenya isa dhumaatii miti. Walitti qabamanii waan tokko murteessun waan tokko ta’us wanti baay’ee barbaachisaafi murteessaan bu’aa walitti dhufeenya sanarraa qabatamaan argamuudha. Akkuma yaadattan kanaan dura Gumiin Hoggansa Oromoo inni yeroo lamaaf gaggeeffamee ture waan heddu lafa kaawwateera. Uummanni Oromoos wanti akka karooraatti lafa kaawame suni maalirra akka gayeefi jijjiirama maalii akka fidu eegaa jira. Haaluma sanaan Gumii yeroo ammaa qaama addaatin gaggeeffamaa jirurraayis Uummanni Oromoo waan adda ta’e tokko ni eega. Tarii wanti addaa gumiin kuni fidee dhufu yoo hin jiraatin qisaasa yeroofi qabeenyaatiin ala bu’aan inni dabalu hin jiru. Marumaafuu, akkuma Oromoon jedhe ‘ Dubbii Gala Dhoorku Malee Baha Hin dhorkan’ , waan gumiin kuni nuu qabatee dhufuuf jiru walumaan, qalbii tasgabbaawaa ta’een haa eegnuu. Yoo waa irraa argannee gammachuun kanuma hunda keenyati, yoo waa irraa dhabnes qaamni waan kana duuba jiru dhaabbatee, of ilaalee gama tokkotti akka deebi’uuf ni gargaara jedheen amana. Waanuma ta’es ta’u, barana Rabbi waliin Gadaan Keenyuma!
« Gabaasa Guyyaa Kabajaa Gootota Oromoo Ebla 15, 2017
DIINQA OROMOO’ Kutaa 1ffaa Obbo Gaaromaa Waaqasaa faana »